नेपाली युवापुस्ताको अवस्था | Butwal Dainik
आहा! ती बालापनका दिन, क्या दिन थिए, जहाँ कुनै तनाव,भबिस्यप्रतिको डर, पैसाप्रतिको लालच केही थिएन । थियो त केबल बालापन, भाडाकुटिको रमाइलो, गोजि भरिका गुच्चाहरुको चिर्लिन छिन्दृन आवाज र त्यहि आवाजमा रम्ने साथिहरुको साथ, अनि त्यहि साथको सान। बच्चाबेला घरमा हुदा बाबा आमाले यो नगर, त्यो नगर भन्दा स्वतन्त्रता नभएको महसुस गर्ने म, आज पुर्ण रूपमा स्वतन्त्रता पाउदा पनि जहिले घरमा जाने दिन गन्दै बसेकी हुन्छु । सानो हुदा मामाघर जादामात्र होटेलमा खाना खान पाउँदा एकदमै स्वादिलो र जहिले होटेलमा नै खानपाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने मलाई अहिले दिनदिनै होटेलमै खाना खान पाउदा पनि घरमा आमाको हातले पकाएको खाना खान कहिले पाइन्छ भन्दै दिन गनेर बस्ने गर्छु ।
बच्चाबेलाका साथी, साथीहरूको साथ, रमाएका ती पलको त्यतिबेला कुनैपनि महत्त्व नभएपनि आज अनुहारमा हासो ल्याउने प्रमुख स्रोत तिनै यादहरु हुने गरेका छन । हो मेरो मात्र नभएर सबै जनाको बालापन र बालापनका यादहरु मुल्यवान नै हुन्छन तर बालापनका कतिपय कुराहरुले आम बालबालिकामा नकारात्मक असर पर्न गएको र पर्न जान सक्ने अवस्था सृजना नहोला भन्न सकिदैन जसको कारण उनीहरुको भबिस्यमा पनि नराम्रो असर पर्न सक्छ । जस्तै पढ्नमा मिहिनेती र ट्यालेन्ट विद्यार्थीलाई घर देखि समाजले नै भबिस्यमा डाक्टर, पाइलट, ईन्जिनियर बन्नु पर्छ । यस्ले भबिस्यमा केहि गर्छ वा गर्छे भन्ने मानसिक प्रेसर थम्याइदिएको हुन्छ । भोलि गएर ती बच्चाहरुको रुचि, चाहना अरु नै फिल्डमा हुनपनि सक्छ भन्ने उनीहरुमा ज्ञानको कमि हुन्छ । त्यही डाक्टर, पाइलट, ईन्जिनियरको हो-हल्लामा हुर्किएका ति बच्चाहरु आज ठुला हुन्छन र पढ्नको लागी घर, समाज वा देश बाहिर नै जान्छन ।
आफ्नो अरुचि हुँदाहुदै पनि परिवार वा समाजको प्रेसमा आएर पढेका ति विद्यार्थीहरु न त आफ्नो रुचिमा राम्रो गर्छन न पढिरहेको विषयमा नै । त्यसो हुदाहुदै पनि आफ्नो पढाइ सक्काई स्वदेशमै केहि गर्छु भन्ने जोस जागर त पक्कै हुन्छ तर हाम्रो देश जहा बेरोजगारी भन्ने शब्द प्रत्येक ब्यक्तिको मुखमुखमा हुन्छ चाहे दक्ष होस वा अदक्ष । हाम्रोजस्तो बिकासन्मुख देशमा इच्छा, योग्यता र काम खोज्ने प्रयास गर्दागर्दै कुनै पनि काम नपाएर यताउता भौतारिनु वा खाली बस्नु बाएक केही उपाय नै हुदैन । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३३ मा पत्येक नागरिकलाई रोजगारिको हक हुने लेखिएता पनि स्वदेशमा रोजगारी नपाएर दैनिक करिब १५ सय भन्दा बढी युवा जनशक्ति बिदेशीने गरेका छन । करिब २३ लाख नेपाली कामदार आप्रवासी कामदारको रूपमा विभिन्न देशमा कार्यरत रहेको तथ्य देखिन्छ ।
औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा गरि अहिले करिब ३० लाख नेपाली युवा बिदेशी भुमरीमा आफ्नो पसिना चुहाई रहेका छन । अझ यही पसिनाले साटिरहेको रेमिटेन्सले नेपाली अर्थतन्त्रको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २० प्रतिशतको योगदान गरिरहेको छ तर नेपाली युवा बिदेशमा कस्तो नियति भोगिरहेका छन सरकारका लागी कुनै चासोको विषय बनिरहेको छैन । नेपाली युवा हरुको अबस्थाबारे सरकारले सोच्नु नपर्ला त?? पक्कै पनि पर्छ ।
नेपालकै केसमा हेर्ने हो भनेपनि हजारौं पढेलेखेका युवाहरु खाली बस्नु परेको छ भने रोजगार पाएका युवाहरु पनि आफ्नो दक्षता र क्षमताको बिपरित रोजगार गर्नु पर्ने बाध्यतामा छन । नेपाल जस्तो गरिबीको रेखामुनि परेको देशमा नेपाली युवाले आफै लगानि गरी आत्मनिर्भर बन्न पनि पर्याप्त स्रोत साधनको आभाब छ । फलस्वरुप नेपाली युवा पुस्तालाई हेर्ने हो भने धेरै जस्तो डिप्रेसनमा जाने, कुलतमा फस्ने, घर परिवारबाट टाढा हुनखोज्ने, साथीहरूबाट टाढा हुने गरेको पाईन्छ । समाजमा हुने हिंसा, बलात्कार, झैझगडा आदि इत्यादी पनि बेरोजगार कै अदृश्य कारक तत्व हुन ।
यो लेख्दालेख्दै मेरो भबिस्य पनि आम नेपाली युवाको जस्तो नहोला भन्न म सक्दिन । यस्तै यस्तै समस्या आगामी पुस्ताहरुले फेस गर्न नपरोस । त्यसका लागी घर परिवार, समाज र सरकार अनि स्वयम युवाहरु पनि जागरुक हुन अतिनै आवस्यक छ । परिवारले पनि आफ्नो बच्चाको चाहना के छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । अरुलाई देखाउनको लागी नभएर आफ्ना छोराछोरीको सुनुच्छित भबिस्यको लागी आफ्नै सोच परिवर्तन गरि आफै बाट नया प्रणालीको सुरुवात गर्न आवस्यक छ, यसो गर्दा ५०% युवाको भबिस्यमा सकारात्मक परिवर्तन आउन सक्छ ।
देबिका भुसाल, बुद्धभुमी-०४,कपिलवस्तु